Mitsangàna sy miorena eo amin’ny toerana masina - Robert D. Hales
Ry zatovolahy isany, ny rainareo sy raibenareo dia tsy mbola niatrika mihitsy ireo fakam-panahy izay atrehanareo matetika. Miaina amin’ny andro farany ianareo izao. Raha te hanana olana ny rainareo dia nila nanao ezaka lehibe izy vao tonga tamin’izany. Tsy toy izany intsony amin’izao! Ankehitriny dia ny fakam-panahy no mitady anareo! Mba tsarovy izany! I Satana dia milofo mitady anareo, ary “mamitsaka eo am-baravarana ny ota.”